कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? यस्ता छन बलात्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारण - Khabar Break
देशमा पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जखन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन्। हालसाल मात्र बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कार पछि हत्या भयो । कोरोनाको कहर र लकडाउनको बिचमा पनि यौन हिंसा, बलत्कारका घटनाहरु बढेर गएको देखिन्छ।
यस्ता घटनाहरु किन हुन्छन ? यसका पछाडीको मनोबैज्ञानिक कारणहरु के के हुन सक्छन त ?
असामाजिक ब्यक्तित्व : असामाजिक ब्यक्तित्व जसलाई साईकोपाथ भनेर पनि भनिन्छ । सम्बन्धित मानसिक रोग लागेका ब्यक्तिहरुले आफ्नो घरपरिबार र समाजमा जो सुकैलाई पनि दुख दिने, सानो सानो कुरामा पनि ठूलो बदला लिन खोज्ने, हत्या बलात्कार गर्न समेत पछि नपर्ने आदि जस्ता कानुनले बर्जित गरेका जघन्य अपराध गर्न पछि पर्दैनन् ।
यौनको लत : यौनको लत लागेका ब्यक्तिहरु यौन प्रती अति नै आशक्त हुन्छन । कति गर्दा पनि उनिहरुमा यौनको प्यास मेटिदैन । यस्तो यौन समस्या भएका ब्यक्तिहरुले यौनको तिर्खा मेटन आफन्त पनि नभन्न सक्छन ।
अप्राकृतिक यौन व्यवहार : जसले यौनलाई सम्भोगको रुपमा भन्दा स्खलनको माध्यम बनाउछ, यस्ता ब्यक्तिले अरुको भावना बुझ्न सक्दैनन र स्वभाविक यौन व्यवहार गर्न पनि जान्दैनन् । यस्ता ब्यक्तिले बलात्कार गर्ने पनि सम्भाबना हुन्छ ।
नैतिक पतन : नैतिक रुपमा पतन भएका ब्यक्तिले पशु भन्दा तल्लो व्यबहार गर्न सक्छन । यस्ता नैतिक रुपमा पतन भएका व्यक्तिबाट आफन्त पनि बलात्कारको सिकार हुन सक्छन ।
यौन कुण्ठा : अबिबाहिक, श्रीमतिबाट यौन सन्तुष्टि लिन नसक्ने यौन कुण्ठाले भरिएको ब्यक्तिले पनि बलत्कार गर्न सक्छ ।
लागू प्रदार्थको सेबन : यसको सेबन गर्दा व्यक्तिले विवेक र चेतना गुमाउन सक्छ र बलात्कार गर्न पुग्छ ।
पोनोग्राफी र साईबर सेक्सको लत : पोनोग्राफीमा बाबुले छोरीसँग यौन सम्पर्क, दाजुले बहिनिसंग शारिरिक सम्बन्ध, आदिजस्ता शिर्षकका अस्लिल भिडियो धेरै भेटिन्छन । यस्ता कुरा धेरै हेर्न तथा यी कुराको लत भएको व्यक्ति नैतिक रुपमा पतन भै हाडनाता करणी गर्न सक्छ ।
मानसिक रोग : मेनिया जस्तो कडा मानसिक रोग लागेको व्यक्ति सधै उत्तेजित हुन्छ ।उसको व्यवहार र बिचार पनि अव्यवहारिक र अनौठो किसिमको हुन्छ । झट्ट हेर्दा उ रोगी जस्तो नि देखिदैन । उसको शरिरमा शक्ति पनि बढेर आउँछ । यौनको आबेग पनि तिब्र हुन्छ । जसलाई उ नियन्त्रण गर्न सक्दैन र बलत्कार पनि गर्न सक्छ ।
शरिरिक कारण : शरिरमा सेक्स हर्मन बढ्दा यौन चाहना बढन गई,आफुलाई यौन अनुशासनमा राख्न नसक्दा पनि बलात्कारका घटना हुनपुग्छ ।
अति विस्वास गर्नु : घर परिबारका सदस्य बिच चाहिने भन्दा बढि घनिष्टता, अति विस्वास र नाता अनुसारको व्यवहार र अनुशासनमा बस्न नसक्दा पनि आफन्त बिच नै करणीका घटना हुन सक्छन् ।
मनोबैज्ञानिक असर : सानोमा यौन दुव्र्यवहारमा परेको व्यक्ति पनि पछि गएर यौन अपराधी हुन सक्छ ।
यौन अनुशासन नहुनु : सानैबाट यौन अनुशासन नभएको, पतित, बिखण्डित, अनुशासनहिन, चरित्रहिन घर परिबार र समाजमा हुर्केको बच्चा पनि पछि गएर यौनमा बिचलिन हुन सक्छ ।
यी र यस्ता अन्य धेरै यौन समस्या (बिचलन), मानसिक एवं मनोबैज्ञानिक समस्याका कारण आफन्तले नै आफन्तलाई जबर्जस्ती करणी गर्न सक्छ ।यस्ता ब्यक्तिलाई मानसिक रुपमा स्वस्थ व्यक्ति मान्न सकिँदैन । किनकि मानसिक रुपमा स्वस्थ व्यक्तिले समाजले स्बिकारेको मात्र काम गर्छ । काम गर्नु अगाडि परिणमको बारेमा सोच्छ । के ठिक के बेठिक छुट्टाउन सक्छ । आफ्नो आबेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्छ । यी र यस्ता गुण नभएको व्यक्ति मानसिक स्वास्थयका हिसाबले रोगी मानिन्छ । -गोपाल ढकाल, मनोबिद्